Hojiiwwan jajjaboo mootummaa Somaliyaa haaraa eeggatan
Caamsaa 16 sabnii Somaaliyaa prezidaantii haaraa Haasan Sheek Mohaamud filateeraa. Biyya prezidaantii wagga Afur waajiraa keessaa turee fi yeroon isaa Guraandhala 2021 raawwateen hogganamaa tureef filanichii xumuraa adeemsa filannoo yeroo dheeraadhaaf turee ti.
"Ummanni Somaliyaa adeemsaa filannoo biyyaalessaa xumuruu isaanitiif yunaayitid Isteets baga milkooftan jetti. Akkasumas, Haasan Sheek Mohaamud prezidaantii repablikii feederaalaa Somaliyaa ta’anii filatamuu isaaniitif baga gammadan jechaa, isaaniif mootummaa isaanii wajjin walti dhiheenyaan hojjanna," jedhan ministirri dhimma alaa Yunaayitid Isteets Antoonii Bliinken.
Wal hamachuun siyaasaa waggoottan Afuriif ture dhimmoottan hedduu jajjaboo ta’an bira darbuudhaan bu’ii argatee jira. Dagaagina Somaaliyaatif mootummaan feederaalaa fi mootumoonni naannoo miseensa mootummaa feederaalaa ta’an atattamaan walti dhufanii tokkumaadhaan rakkinaawan biyyatti ijoo ta’an dura dhaabbachuu qabu. Rakkoowwan lama dursanii xiyyeeffannaa argachu qabu jedhan dhaabbata mootumootaa gamtoomanitti Ambaasadarri Yunaayitid Isteets Liindaa Toomaas griin fiild.
Innii jalqabaa fedhii balaa garee shororkeesitootaa Al shabaabin umamee jiru dhabamsiisuuti.
Nageenyii Somaaliyaa fi nageenyii naannichaa shororkeessumaadhaan lollu irratti meeshaa hunda nu itti fayadamnu irratti kan murtaa’eedha. Sana jechuun Akkaataa erggama ce’uumsaa Somaliiyaa kan gamtaa Afrikaa ykn (African Union Transition Mission in Somalia ATMIS) gargaaramu jechuudha. Uggurawwan Somaaliyaatti fayyadamuudhaan akka mootummaan gochaawan Al-shabaab warra nagaa fi tasgabbii Somaaliyaaf soda ta’uu itti fufan adda baasu jechuu dha. Kana jechuun haalawwan rakkina jireenya namoomaa hamaa ta’e isa fiinxaalessummaa toosisu fooyyessuu, furuu jechuu dha"
Rakkinni lammafaan hamaan mootummaan haaraan dura dhaabachuu qabu, balaa namoomaa sababa hongee waggootan Afuran darban umamee lammiilee Somaliyaa miiliyoonii 6 ol miidhaa jiru, qaala’insaa gatii midhaan nyaataa, weerera Raashaan Yuukreen irratti raawwatteen kan ka’e haalaa qamadiin fi midhaan nyaataa akka somaliyaa hin geenyee taasisee fi biyyatti garaa beelaati dhiibuu danda’uudha.
"Ji’a Ebilaa keessaa Yunaayitid Isteets fedhii gargaarsa namoomaaf deebii kennuudhaan deggersa dhabalataa Doolaara miiliyoonii 200 biyyootan gaanfaa Afrikaatiif kenniteetti," jedhan Ambaasadar Liindaa Tomaas Giriin fiild.
"Somaliyaan yeroo Amma fooyya’insaa siyaasaa, diinagdee fi nageenyaa irratti xiyyefachuudhaan fedhii ummata biyyatti guutuudhaaf carraa qabdii," jedhan ministirri dhimma alaa US Antoonii Bilinken.
Yunaayited Isteets hoggansaa Somaliyaa waliin ta’uudhaan Somaliyaa naga qabeetti, demokiraatoftu fi dureetti mirkaneesuudhaaf fedhii qabdii jedha barreeffamnii ejjannoo Yunaayitid Isteets mootummaa Somaliya haaraa wajjiniin qabdu ibsu.